Mizarà, tahirizo ary tadiavo amin'ny Trunk.ly | Martech Zone
Talata, Aogositra 16, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Roa herinandro lasa izay dia nisoratra anarana aho Trunk.ly. Alao an-tsaina ny fanakambanana ny Delicious na Diigo amin'ny Twitter… izany no Trunk.ly! Amin'ny ankapobeny, apetrakao amin'ny Trunk.ly daholo ny kaontinao an-tserasera ary hitan'izy ireo sy atontan'izy ireo ny rohy tokana apetranao. Mankasitraka izay zavatra mahavonjy ahy minitra vitsy isan'andro aho ary mpamatsy fotoana be io.
Rehefa nieritreritra aho fa hanidy ny varavarany i Delicious (talohan'ny nanafihan'izy ireo), dia natodiko ho amin'ny Diigo. Ny olana, mazava ho azy, dia mila manisy marika, mitsitsy ary mizara ny rohy rehetra aho. Trunk.ly dia mandray ny dingana fanamarihana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso fotsiny ny lahatsoratro mankany LinkedIn, Twitter, Facebook, Quora, Tumblr, Posterous, Instagram, Google Reader, RSS feeds ary maro hafa!
Seho roa fanampiny no mahafinaritra… Trunk.ly mijery sary mihetsika amin'ny sary sy sary isaky ny rohy ao amin'ilay lahatsoratra mifandraika amin'izany. Trunk.ly dia mametraka azy rehetra ao anaty tahiry maripejika marobe. Ny fikarohana ny tsoratadidiko dia tsotra toy ny fanoratana amin'ny "avy amin'ny: douglaskarr" miaraka amin'ny teny fikarohako. Trunk.ly koa dia manome feed syndication ny rohy raha toa ianao te-hamoaka azy ireo any an-kafa na manana ny olona hisoratra anarana amin'ny rohy.
Raha tsy tianao ny tabataba sy resaka tsy misy dikany amin'ny media sosialy, mamela anao hanaraka olona iray fotsiny ny Trunk.ly ary mahazo ireo rohy zarain'izy ireo. Izany dia manapaka feo kely amin'ireo olona sosialy be tabataba any!